INdlovukazi ihlubula ihlazo iNkosana u-Andrew yazo zonke iziqu zempi phakathi kwehlazo locansi
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-UK Breaking » INdlovukazi ihlubula ihlazo iNkosana u-Andrew yazo zonke iziqu zempi phakathi kwehlazo locansi
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Ubugebengu • Amasiko • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ze-UK Breaking
Emacaleni akhe aphikisana nobukhosi baseBrithani, uVirginia Giuffre uthi washushumbiswa eNkosana u-Andrew ukuze enze ucansi ngusozigidigidi ongasekho u-Epstein kanye nozakwabo osanda kulahlwa yicala uGhislaine Maxwell.
The UKIBuckingham Palace ikhiphe isitatimende esifushane namuhla imemezela ukuthi "izinhlangano zezempi zePrince Andrew kanye nabaxhasi baseRoyal" babuyiselwe embusweni. Queen.
Lesi simemezelo siza ngemuva kosuku abameli bakaPrince Andrew behlulekile ukuncenga a US ijaji ukuze lichithe icala lokuhlukumeza ngokocansi elibhekene nobukhosi ngokobuchwepheshe. Icala limayelana nezinsolo ezivezwe nguVirginia Giuffre, othi inkosana yayihlanganyele naye ocansini ngo-2001 ngesikhathi isencane.
“Nge QueenUkugunyazwa kanye nesivumelwano, izinhlangano zezempi ze-Duke of York kanye nabaxhasi baseRoyal kubuyiselwe ku-Queen. UDuke wase-York uzoqhubeka nokungenzi noma yimuphi umsebenzi womphakathi futhi uvikela leli cala njengesakhamuzi esizimele, ”kufundeka isitatimende seSigodlo.
INkosana u-Andrew ukuphikile ukuhlukumeza ngokocansi u-Giuffre, ethi engxoxweni ka-2019 ukuthi akakhumbuli ngisho nokuhlangana naye. Isithombe esitholakala esidlangalaleni sobukhosi, nokho, sibonisa inkosana ibambe isandla okhalweni lukaGiuffre, njengoba laba bobabili babethwetshulwe eLondon.
Ngaphambilini ngoLwesine, bangaphezu kuka-150 omakadebona bezempi baseBrithani abafake izicelo Queen ukumcela ukuthi aphuce indodana yakhe izindima zayo zezempi ezihlonishwayo futhi aqondise umqondo wokuba nayo ikhululwe ngendlela ehlazisayo.
"Siphatheke kabi futhi sicasukile ukuthi iNkosana u-Andrew useyilungu lezempi futhi uyaqhubeka nokubamba izikhundla zempi, izikhundla nezikhundla, okubandakanya nesePhini lika-Admiral weRoyal Navy," kusho omakadebona encwadini evulekile.